2014: Sannad halaag u ah caruurta caalamka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kubanska skolbarn firar internationella människorättsdagen. Foto: Lotten Collin / Sveriges Radio
2014: Sannad halaag u ah caruurta caalamka
"2014: Sannad halaag u ah caruurta caalamka" UNICEF SWEDEN
La daabacay måndag 15 december 2014 kl 14.52
Sannadii 2014, waxay ahayd mid halaag u ah caruurta caalamka, sidaa ayaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay hey’adda Unicef. Warbixintan oo xaqiijisay in caruur tiradoodu gaadhayso 230 milyan ay ku nool yihiin waddamo ay ka holcayaan yihiin khilaafyo hubaysan.
Warbixintan darayga ah, ayaa sheegay in 15 milyan oo caruur ah in lagu haleeleen khilaafyo, halkaas oo lagu khasbay in ay qayb qaataan dagaalo, kufsi iyo rabshado kale oo halis ah. Waddamaas oo ay ka mid yihiin Falastiin, Suuriya, Ciraaq, Koonfurta Sudan, Jamhuuriyada Afrikada Dhexe iyo Ukraa’iin.
Ururka QM u qaabilsan ee caruurta ee UNICEF ayaa sidoo kale leh waxaa la hilmaamay khilaafyo iyaguna kuwan la mid ah oo muddoba ka aloosnaa waddamada Soomaaliya, Afqaanistaan, Jamhuuriyada Kongo iyo Nayjeeriya, Yemen iyo Bakistaan.
Fatima waa 5-jir ka soo qaxday dagaalada Suuriya.
-Waxay dhacayay oo la isku ridayay hubka lidka diyaaradaha, ayay leedahay Fatima oo u sugan waddanka Turkiga, kana soo qaxday magaalada Aleppo ee waddanka Suuriya.
Waxay xasuusata dagaaladu ahayn kuwo xoog badan. Lakiin arrintaas keli kuma ah. Sannadii 2014 ayaa ahayd mid rabshado iyo khilaafyadu kordheen, caruur badana dhibaato soo gaadhay. Sida ay sheegayso Unicef. Waxaa kaloo jira tilmaamo cadaynaya in ay sii korodhay rabshada sida tooska ah loogu geeystay caruurta.
-Suuriya waxaa si toos ah loo weeraray iskuulo, waxaa la khaaraajiyay caruur. Waxaa la weeraray gabdho ku socda iskuul. Inkastoo sawirka guud dhigayo in caruurta ay soo gaadhaan dhibaatooyin dadbani, haddana waxaa jira khilaafyada qaar caruurta si gaar ah loo bar tilmaamsado. Sida u sheegayo Per Westberg oo ah xog-haye ku xigeenka Unicef Sweden.
Suuriya oo qudha ayaa 7 milyan oo caruur ah uu sameeyay dagaalku. Halkaas oo ugu yaraan 35 weerar si toos ah loogu bar tilmaamsaday iskuulo, sannadan 2014.
Jamhuuriyada Afrika Dhexe ayaa in ka badan 10 kun oo caruur ah ay bar tilmaameed u yihiin kooxa hubaysan. Jiida Qasa ayaa 54 kun oo caruur ah ay guryo la’aan ku noqdeen dagaaladii xagaagan ka dib.
–Way adagtahay in la yidhaahdo khilaafkan ayaa ka xun midkaas. Haddii masiibooyinkan lays barbar dhigo oo macaluusha Sudan la barbar dhigo xad gudubyada loo geysto hablaha reer Afqaanistaan. Maaha wax lays barbar dhigi karo, midba wuu ka daran yahay ka kale, ayuu leeyahay Per Westberg.
Tirada khilaafyada is garab socda iyo saxaafada oo hadba diirada ka jeedinaysa khilaafyada qaar ka mid ah , ayaa keliftay in ururada caawimooyinku in ay wax kaalmo ah u helaan shaqooyinkii ay goobahaas ka wadeen, sidaa ayuu leeyahay Per Westberg oo ah xog-haye ku xigeenka Unicef Sweden
-Waxay ahayd sannad ay adagtahay in la helo maalgelin. Maddama oo ay jiraan khilaafyo badan oo is garab socda iyo in dhibaatada Suuriya ay daba dheeraatay, dad badanina ay la qabsadeen ayuu leeyahay Per Westberg.
Isaga oo hadalkiisa sii watana wuxuu leeyahay, sannada 2015 ayaa la filayaa in nasiib daro ay dhibaatooyinka halkaas ka sii socdaan, sidaa awadeedna loo baahan yahay caawimooyin is daba jooga oo deg deg ah.